UAE na Fast Track | Ọrụ - Ọrụ - Ọghe mepere emepe maka ihe ohuru na ihe okike
Nwere ike 30, 2019
UAE batara na mbụ na Management Practices, nke abụọ na Trade International, Ọdịdị na arụmọrụ, Ihe Njirimara, Ụkpụrụ na Ụkpụrụ na nke atọ na Ịha Ọha na Iwu.
Ndị United Arab Emirates, UAE, anọgidewo na-eduga mpaghara mpaghara ya na nke ise n'uwa dum na asọmpi zuru ụwa ọnụ, dị ka akwụkwọ akụkọ World Competitiveness Yearbook 2019, nke International Institute for Management Development bipụtara, IMD. Taa "UAE abanye n'ime ise ise maka oge mbụ," kwuru na ọkwa nke IMD World Competition.
N'ihe ọhụụ na-eduzi
2021 - 2030: UAE ga - enweta 2030 Economic Vision 2030, Environment Vision 2030 (Abu Dhabi), Atụmatụ Abu Dhabi 2030, Abu Dhabi Ụgbọ njem Mgbanwe Management, Ụgbọ njem Ụgbọ njem (Abu Dhabi), Dubai Autonomous Transportation Strategy, Dubai Strategy Industrial 3, Dubai 2030D Stratching Stratégie na UN's XNUMX Agenda. (Portal nke UAE Gọọmentị)
Echefula Ụmụ amaala na njem ọsọ ọsọ gaa Smart Future.
Ọnọdụ a nke zuru oke nke usoro okwu-efu na-eduzi ihe niile ma na-ezere mgbanwe dị obere na atụmatụ, anyị nwere ike ịhụ na mpaghara ndị ọzọ nke ụwa.
Ike nke a mụrụ na udo
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ya oge ụfọdụ ma ọ bụ ndị ọzọ na ụlọ nzukọ ụfọdụ gburugburu ụwa: Ebube nke ngwaahịa ndị dị egwu, ọrụ ndị dị egwu, Olympus nke ikike ndị ọkachamara na-azụ ahịa na ụwa na-eduzi.
Nhọrọ ọzọ bụ ahụmahụ dị ụtọ na-ezukọ na ọnọdụ nkwanye ùgwù na ige ntị na-ege ntị. Onye ọ bụla nọ na-ahapụ nnọkọ nke creativity na mmụba ihe ọmụma.
Nzọụkwụ ka ọdịda ọdịbendị na-eme n'ọdịnihu.
Na ụzọ na-acha akwụkwọ ndụ UAE
Mba ndị bara ọgaranya nke GCC amalitela ịga akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma gbalịsie ike ịmepụta akụ na ụba ha site na mmanụ ọkụ. Ọ bụ ezie na onye ọkwọ ụgbọala bụ isi nke mgbalị dị iche iche dị iche iche bụ iji belata nrụpụta nke ịdaba mmanụ, ndị GCC na-agbasi mbọ ike imeghachi omume na-arịwanye elu na-achọ ime ihe banyere mgbanwe ihu igwe.
Nlere anya kwa ụbọchị na mgbasa ozi dị nro na-egosi ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke usoro ihe ọkụkụ dị n'ógbè ahụ. UAE nọ na ala iji belata akara ụkwụ carbon.
Echefula mgbanwe ngbanwe ihu igwe.
Ndị na-egwu ụwa
Dubai nọgidere na-adọrọ mmasị n'ụwa nile maka ego ego ndị ọzọ (FDI) dịka ọ na-edekọ 41 pasent 100 n'ime afọ FDI n'afọ gara aga na Dh38.5 ijeri, na-etinye ọkwa ahụ n'ọnọdụ mbụ n'ime ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ọrụ FDI na isi obodo . (Khaleej Times)
Ile anya na windo na-acha uhie uhie nke na-acha uhie uhie bụ nkọwa dị egwu nke ike nke aku na uba. Ihe ịrịba ama mbụ maka ịkwado egwuregwu zuru ụwa ọnụ nọ na mbara ala, ma a ka nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme.
Ịzụta teknụzụ mpaghara na ahịa ụwa bụ nzọụkwụ dị mkpa ọzọ.
Ntorobịa na ibu ọrụ
"Afọ iri na ọkara gara aga ahụwo nnukwu mmụba na ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ Middle Eastern na-agwụcha ma ọ dịkarịa ala akụkụ nke agụmakwụkwọ mahadum ha. Dika onu ogugu ndi mmadu ndi mmadu na-achogharia kwa ubochi na-acho kwa afo, mba ndi ozo n'Ebe Etiti Ebe Ozo abughi nani ndi mmadu na-acho, kama ha na-ebuwanye ibu ha. "(TopUniversities.com)
Ịga na mahadum ndị a kwadebere nke ọma na mpaghara ahụ bụ ahụmahụ na-akpali akpali. N'ịbụ ndị a kwadebere nke ọma, ndị a bụ ebe ị nwere ike izute ndị na-eto eto nwere ezi uche, ndị gụrụ akwụkwọ. Mkparịta ụka maka ọdịnihu na-emepụta ihe ọhụrụ bụ ahụmahụ bara uru ma mepee ọhụụ ọhụrụ na ọrụ ọkachamara.
UAE na-akọwa ụzọ nke iji ike nke ndị na-eto eto. "A họpụtara Onye Ukwu Shamma bint Suhail bin Faris Al Mazrui, bụ onye 22 dị afọ, dịka Minista State nke UAE maka Ndị Ntorobịa na Ụlọ ọrụ ọhụrụ, mara ọkwa na February 2016. N'ihi ya, ọ bụ ya bụ ọdụdụ ọdụm n'ụwa. Ihe ndi ozo bu itinye aka na ndi ntorobia na ndi ochichi na Council Council, ime ka atumatu atumatu na atumatu iji meziwanye ike ndi ntorobia, tinyere itinyekwu ike ha n'uzo di iche iche. "(United Arab Emirates, Cabinet)
Kwụsị ịkwụsị ahụmahụ ndụ.
Mepee maka Nmeputa
"Dubai-Abu Dhabi 12 nkeji Hyperloop nke 2020 meghere" - "Nrụpụta nke otu n'ime ọrụ ike anyanwụ kachasị elu (CSP) dị n'ime ụwa amalitela na United Arab Emirates (UAE)." - "Under the Directions of His Ọdịdị Shaikh Mohammed Bin Rashed Al Maktoum, Onye isi oche na Prime Minista nke UAE na Onye Ọchịchị nke Dubai, Dubai Future Foundation na njikọ ya na Ụzọ okporo ụzọ na okporo ụzọ Dubai Kwadoro 'Dubai Autonomous Transportation Strategy'. "-" Dubai 3D Structures Strategy ga-eme Dubai na ụwa 3D obibi obibi. "
Anyị na-ebi n'oge nke ọgba aghara, ebe usoro ndụ nke ihe ọhụrụ na-ebelata n'ụzọ dị ịrịba ama. Kwa mpaghara nke ụwa na-ekwu okwu banyere ihe ịma aka ahụ site na otu akwụkwọ ma ọ bụ karịa. Mgbe ụfọdụ, mahadum na ụlọ ọrụ nyocha nwere ike ịchọta ihe ndị na-enye obi ụtọ, mana mmejuputa mmepụta teknụzụ ndị a na-eme ka ọ ghara ịda mbà n'ime ọhịa nke arụ ọrụ. Ọ bụ ihe ọṅụ ịhụ otú Dubai na-etinye ihe ize ndụ iji bute ụzọ site na itinye mmekorita Key Enabler na teknụzụ maka ọdịnihu.
Nọgide na-emejuputa atumatu ma mụta site na ime ihe.
Imepụta na ọdịbendị omenala
Ndị UAE ahụ hụrụ ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị mmadụ na-abawanye n'ime afọ ole na ole gara aga n'ihi nnukwu ọganihu dị iche iche na akụ na ụba dị iche iche nke na-eduga n'ọtụtụ ndị ọrụ sitere na ọdịbendị na okpukpe dịgasị iche iche. Site na 4.1 nde na 2005, ọnụ ọgụgụ nke UAE toro na 8.3 nde site na njedebe nke 2010. Site na nke a, ọnụ ọgụgụ ndị amaala UAE bụ ihe na-erughị 1 nde (947,947). (UAE Gọọmentị)
Nzukọ na Dubai na-arụ ọrụ ọhụrụ na ọgbara ọhụrụ na-eji ya nchịkọta nke mba si gburugburu ụwa. A jikọtara ikike, ahụmahụ na omenala iji rụọ ọrụ n'ọdịnihu. E jiri ya tụnyere mba dịka Germany, nke a bụ ihe dị iche iche nke imekọ ihe na otu. N'ihe di iche iche di iche iche, ogidi nke umu amaala nke ndi mmadu na-enye nkwụsi ike ka ha biri na ndi mmadu zuru oke.
mmechi maka UAE na ngwa ngwa
Ịtụle njirimara mba na ọdịiche dị iche iche nke omenala na-ewusi ntọala siri ike na ụzọ nke Smart Future.
Onye edemede: Roland Spranz - Bridging Europe, Middle East na Afrika
Uru site na Innovation UG - Salzatal - Germany
Hilal Engineering Consultancy - Sohar - Sultan of Oman
Njikọ na Linkedin - UAE na ngwa ngwa